November 2020 - Channel Lover
November 29, 2020 by Channel Lover
” ပံ့ သ ကူ ” ရဲ့အနက်အဓိပ္ပါယ် ” ပံ့သကူ “ဆိုတဲ့…စကားလုံးလေးဟာ…အတော်များများ ကြားဘူးကြပြီးသားဖြစ်ပြီး…မြန်မာတွေနားနဲ့ မစိမ်းလှပါဘူး….။ သို့သော်လည်း…..ပံ့သကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့….လူအများနားလည်ထားကြတာကတော့….အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ….လမ်းဆုံလမ်းခွတွေ လူသူလေးပါးအသွားအလာများတဲ့နေရာတွေမှာ မနက်အစောကြီး(ကျီးမနိုးခင်)ထပြီးမည်သူမျှမမြင်အောင် ငွေ/ပစ္စည်း တခုခုကို ပစ်ချထားခဲ့ရမယ်…ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်…. ပြုလုပ်သူမှာလည်း ငွေကြေးဥစ္စာတွေ တိုးပွားလာလိမ့်မယ်……ဆိုတာလောက်ကိုဘဲ…အများစုက ကြားဘူးနားဝရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ…..တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့တော့ မှန်ပါသော်လည်း..တကယ့်ပံ့သကူ အစစ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်အစုံကတော့….ဒီထက်မက အဓိပ္ပါယ် ခံယူချက်ရည်ရွယ်ချက်က များစွာ ကျယ်ပြန့်လှပါတယ်။ ဒါကြောင့်…..ပံ့သကူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အဓိပ္ပါယ် နှင့်ပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်အခါတွေကို တိတိကျကျသိရှိကြရအောင်လို့ အနည်းငယ်မျှရေးသားပေးပါရစေ။ ပံ့သကူရဲ့…တကယ့်အနက်အစစ်က…#ပံသုကူလ ဆိုတဲ့…ပါဠိစကားကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး….ပံသုကူလ……ပံသုကူ…….ထိုမှတဆင့် ပံ့သကူ လို့….ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်….. ((ပံသုဆိုတဲ့ပုဒ်က မြေကြီး ဖြစ်ပါတယ်))အဓိပ္ပါယ်ကတော့…..#ပါပံသုကူလ…#မြေမှုန့်ကဲ့သို့စက်ဆုတ်ဖွယ်ကောင်းသောအဝတ် လို့…အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ရှေးယခင်…..မြတ်ဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါက….ရဟန်းတော်တို့ဟာ….သင်္ကန်းအတွက်….လူတို့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ အဝတ်စတွေကို ရှာဖွေကြရပါတယ်ဒီလိုရှာဖွေကြရတဲ့အခါ…. အဝတ်စအများစုကိုတွေ့နိုင်ရနိုင်တာကများသောအားဖြင့် အမှိုက်ပုံနဲ့ သချိုင်းကုန်း ၂နေရာသာဖြစ်ပါတယ်….ဘာလို့လည်းဆိုတော့…. လူတွေက….မိမိတို့မလိုချင်တော့တဲ့ … Read more
မိခငျအတှကျ ငှတေပွားမှ မထုတျတဲ့ သားဖွဈသူရဲ့ စိတျရငျးအမှနျ
November 12, 2020 by Channel Lover
ခဈြပရိသတျကွီးရေ လူတိုငျးမှာတော့ မိဘကိုယျစီ ရှိကွမှာပါနျော။ မိဘနှဈပါးထဲမှာမှ သားသမီးအမြားစုက မိခငျဖွဈသူနဲ့ပဲ ပိုရငျးနှီးကွတာကို တှမွေ့ငျရပါတယျ။ ဖခငျတှကေတော့ မိသားစု စားဝတျနရေေးအတှကျ ရုနျးကနျရှာဖှနေရေတာမလို့ သားသမီးတှအေတှကျ အခြိနျမပေးနိုငျတာကွောငျ့ သိပျမရငျးနှီးကွတာပါ။ တကယျတော့ ဖခငျတှကေလညျး သားသမီးတှကေို ခဈြကွပါတယျ။ ဒီနလေ့ေးမှာ ပွောပွပေးသှားမှာကတော့ သားအတှကျ အမွဲစဥျးစားပေးတဲ့ မိခငျနဲ့ မိခငျမသိအောငျ နောကျကှယျက အမွဲဂရုတစိုကျရှိတဲ့သား သူတို့သားအမိ နှဈယောကျအကွောငျးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ တဈနတေ့ော့ သနျးကွှယျသဌေးကွီးက သူ့အမကေိုသှားတုစိုကျပေးဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးသှားဆရာဝနျစီကိုချေါသှားပါတယျ။ ဆရာဝနျက အမကွေီးကိုသခြောစဈဆေးပေးပွီး အကောငျးဆုံးသှားတုကိုထုတျပွပါတယျ။ အမကွေီးက စြေးမေးလိုကျတယျ ပွီးတော့ ခေါငျးခါပွပွီး စြေးအပေါဆုံးကိုပွခိုငျးပါတယျ။ ဆရာဝနျက သူ့သားကဘောစိအကွီးစားပဲ အကောငျးဆုံးကိုသာသုံးဖို့အတှကျ သူ့သားဘောစိကိုမကျြရိပျမကျြကဲပွလိုကျတယျ…ဒကောငျ့သားက မမွငျခငျြဟနျဆောငျနတေယျ။ ဆရာဝနျလညျးမနနေိုငျတော့ လှမျးချေါလိုကျတယျ။ဆရာသမားက မကွားခငျြယောငျဆောငျပွီး ဖုနျးပှတျပွီးဟိုဖကျတောငျလှညျ့သှားလိုကျသေးတယျ။ ဆရာဝနျစိတျထဲမှာတော့ ဒီကောငျ ဘယျလိုကောငျလညျးကှ … Read more
တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး (12.11.2020 မှ 18.11.2020 အထိ)
12.11.2020 မှ 18.11.2020 အထိတဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး တနင်ျဂနှေ ဒီကာလဟာ အထူးအသိအမှတျပွုခွငျးခံရတတျတဲ့နရေ့ကျတှပေါပဲ။ မိမိလုပျဆောငျသမြှ အမြားကအတုယူရတဲ့ အထိဖွဈတတျပါတယျ။ လုပျငနျးအတှကျလိုအပျခကျြတှကေို အထကျကိုတငျပွတောငျးခံလို့အထူးကောငျးတဲ့ကာလ ပါပဲ။ အလုပျလြှောကျထားတာတှရှေိရငျ ဒီကာလမှာအလုပျ ရတတျပါတယျ။ငှကေုနျနတောတှရှေိရငျရပျတနျ့သှားပါ လိမျ့မယျ။ မိမိတို့အတှကျအဘကျဘကျကအခကျအခဲတှနေညျးပါးပါတယျ။ လုပျသမြှအဆငျပွခွေငျး၊ ကွံ စညျသမြှ အောငျမွငျခွငျးတှကေိုအထူးကွုံရပါလိမျ့မယျ။ မိတျဆှပေေါမြားပါလိမျ့မယျ။ ဝေးကှာနတေဲ့သူငယျခငျြး တှနေဲ့ပွနျ လညျ ဆုံဆညျးရတတျပါတယျ။ပွနျ့ကြဲနတေဲ့ငှကွေေးတှကေိုကောငျးစှာပွနျစုနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ကွီးမားတဲ့ ဆုံးဖွတျ ခကျြမြား၊ အရေးကွီးတဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာမြားကိုအထူးအလေးပေးဆောငျရှကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဌာနဆိုငျ ရာနှငျ့ ပတျသကျသောကိစ်စမြားလိုကျပါဆောငျရှကျလို့အထူးကောငျးပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့အညံ့အဆိုးနညျးပါ တယျ။ ရောဂါကငျးပွီးစိတျခမျြးသာပါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ခဈြသူအကွောငျးကိုမိဘတှအေားဖှငျ့ပွောသငျ့ တဲ့နေ့ ပါပဲ။ အိမျထောငျရေးကိစ်စတှမှောတော့ အထူးညံ့တာမြိုးရှိနပေါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လဲ အထူးကံ ကောငျးနပေါလိမျ့မယျ။ ကွိုးစားထားသညျထကျပိုမိုအောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။ အကြိုးပေးဂဏနျး 1/5/8 အထူးဟော ကံမွငျ့မားနပေါလိမျ့မယျ။ ယတွာ … Read more
မကြာမီ ကြီးပွား ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ…။
November 7, 2020 by Channel Lover
မကြာမီ ကြီးပွား ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ ကြီးပွား ချမ်းသာချင်ရင် အာစိဏ္ဏကံကုသိုလ်..၊ ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ရဲ့လား။ သောက်တော်ရေရော နေ့စဉ် ကပ်ဖြစ်ရဲ့လား။ ဘုရားပန်းလည်း အပတ်စဉ်လှူဖြစ်ရဲ့လား။ အဲ့လို့နေ့စဉ် လုပ်ရင် …ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတာလို့ ခေါ်တယ်..။ မကြာခင် ကြီးပွါးတော့ မယ့် လက္ခဏာပဲ။ သေချာမှတ်ထား၊ လောကမှာ အကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့ လူရယ်၊ ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့ လူရယ်လို့ လူနှစ်မျိုး ရှိတယ်..။ လူတစ်ယောက်ဟာ အကုသိုလ် ဘက်မှာ စွဲသွားပြီ ဆိုရင် အဲဒီလူဟာ မကြာခင် မွဲသွားတတ်တော့တာပဲ။ တွေ့ဖူးတယ်မလား၊ အရက်သေစာသောက်စားမှု ကို စွဲသွားတဲ့ သူတွေ၊ မကောင်းတဲ့ေ နရာတွေမှာ စွဲလမ်းသွားတဲ့ သူတွေ ကိုလေ..၊ အဲ့သလို … Read more
မိမိစိတ်ထဲ ကံနိမ့်နေတယ်ထင်ရင် လုပ်ကြည့်သင့်တည့် အရာများကို အများသိအောင် မျှဝေပေးကြပါအုံးနော်…
November 5, 2020 by Channel Lover
မိမိစိတ်ထဲ ကံနိမ့်နေတယ်ထင်ရင် လုပ်ကြည့်သင့်တည့် အရာများကို အများသိအောင် မျှဝေပေးကြပါအုံးရှင့် ဇော်ဂျီ / ယူနီကုဒ် Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ကံတွေ နိမ့်နေပါလားလို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာရင် ဒါလေး လုပ်ကြည့်ပါ ။ ထူးခြား လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် …။ လောကကြီးမှာ ဘာပဲလုပ်လုပ် အမြဲတမ်းအဆင်ပြေတယ် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး …။ အလုပ်အကိုင်တွေလည်း ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက် ကျမ်းမာရေး ကောင်းလိုက် ညံ့လိုက် ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေး ကျလိုက် တက်လိုက် စသဖြင့်ဘ၀ပင်လယ်ပြင်မှာ ကံကြမ္မာရေလှိုင်း၏ နိမ့်ရာမြင့်ရာအတိုင်း မြောပါနေကြရပေသည် …။ အဲလို ကျင်လည်နေကျရတဲ့အတွက် အဆင်ပြေနေရာကနေ ရုတ်တရက် အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း အလုပ်အကိုင် မကောင်းဖြစ်ခြင်း လာဘ်လာဘတ် တိတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုတွေ့တဲ့အခါငါကံဆိုးနေပါလား ကံတွေ နိမ့်နေပါလား လို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာရင် … Read more
November 4, 2020 by Channel Lover
နေစရာ အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် (တန်ဖိုးရှိလွန်းလို့သိမ်းထားခဲ့တာပါ။အခုခေတ်မှာ လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီ။) ဆရာကြီးဒဂုန် ရဲ့စာတွေဖတ်ရင်း တွေ့မိလို့သိမ်းထားခဲ့တဲ့ထဲက အိမ်ဆောက်ရင် လိုအပ်ချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မြင်လဲမြင်ဆရာ ပါ။ သူရေးခဲ့တဲ့ စာစုကို ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဝေဒင်္ဂတို့နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ စား-၀တ်-နေ-ရေး ကြောင့်ပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီ စား-၀တ်-နေ-ရေး ဆိုတဲ့ စကားလေး သုံးခွန်းဟာ နှုတ်ကပြောရာမှာ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် သေသေချာချာ တွေးကြည့်လေ လေးနက် ကျယ်ပြန့်လေပါပဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှမစားလို့ မ၀တ်လို့၊ မနေလို့ ရလို့လား၊ မစားဘဲ၊ မ၀တ်ဘဲ၊ မနေဘဲ ရနိုင်ရိုးလား။ ရှာရ၊ ဖွေရ၊ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေ၇တာ၊ မပြောချင်၊ မဆိုချင် မဆက်ဆံချင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရတာ တွေဟာ အဲဒီစားဝတ်နေ ဆိုတဲ့ ဟာကြီးကြောင့်ပါ။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီပီပီပြောရရင် ခန္ဓာအိမ် … Read more
မိမိအိမျတှငျနထေိုငျတဲ့ မိသားစုဝငျအားလုံး စီးပှားလာဘျရှငျတိုးတကျစရေနျ ..
လူတွေရှေ့တင် ဓားနဲ့ထိုးသွားတာတန်ဘိုးရှိတဲ့ဆရာဝန်တဦး ကြွေရပြန်ပြီ(ရုပ်သံ) ဒေါက်တာစောခိုင်မြတ်တော်ဝင်ဆေးခန်း သိရိလမ်းအရမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်… အရှေ့ကုန်းလမ်း ထဲမှာ ဒီမနက်သူ့ကားပေါ်တက်ခါးနီး အချိန်အကျီပန်းရောင်နဲ့လူကဓားနဲ့ထိုးပီး ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလုပြေးတာ လူတွေရှိရက်နဲ့ဗျာ… နေထိုင်မကောင်းရင်တောင် ဆရာ့ဆီတခါလောက်သွားပြလိုက်တာနဲ့ကောင်းသွားတာ လို့သိရတယ်.. စမ်းချောင်းက လူတွေအတော်အားကိုးရတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။ အခုလို ကိုဗ စ်ကာလကြီးမှာလည်းတခြား တချို့ ဆေးခန်း ဆရာဝန်တွေကိုဗ စ်ကြောက်လို့ ပိတ်ထားပေးမယ့်သူက လူနာတွေအတွက် ဆေးခန်းဖွင့်ပေးထားတာတွေ့နေရတယ် ။ မနက်ခင်း ဒီသတင်းကြားရတာစမ်းချောင်း သူ/သားတွေ အတွက်စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ခုပါဘဲ .. ဆရာ့ဆီ ပြတဲ့ သူတွေ စမ်းချောင်းမှာများလှပါ တယ် ။ ကောင်းရာမွန်ရာဘဝ ရောက်ပါစေဗျာ unicode လူတှရှေတေ့ငျ ဓားနဲ့ထိုးသှားတာတနျဘိုးရှိတဲ့ဆရာဝနျတဦး ကွှရေပွနျပွီ(ရုပျသံ) ဒေါကျတာစောခိုငျမွတျတျောဝငျဆေးခနျး သိရိလမျးအရမျး စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ… အရှကေု့နျးလမျး … Read more
November 3, 2020 by Channel Lover
သင့်နှုတ်ခမ်းတစ်စုံက ပြောပြပေးမယ့် သင့်အကြောင်း အေ) ပါးတဲ့နှုတ်ခမ်း ပုံမှာပြထားသလို သင့်နှုတ်ခမ်းဟာ ပါးတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ နေတတ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးချင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါပဲ။ ခုလိုပြောလို့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က သင်နဲ့ပတ်သက်သူတွေကို ကျေးဇူးမတင်တတ်ဘူး၊ မချီးမွမ်းတတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမျိုးတွေ သင်တကယ်ကို ပြောဆိုပြုမူတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ တစ်ပါးသူရဲ့ အကူအညီကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းနည်းသာ လိုချင်သူပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရပ်တည်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ခုခုလုပ်ချင်ပြီ၊ ဖြစ်ချင်ပြီဆိုရင် သင့်ကို ဘယ်သူမှ မတားဆီးနိုင်ပါဘူး။ သင်ဟာ Kate Middleton တို့ Beyonce တို့လိုနှုတ်ခမ်းမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဘီ) နှုတ်ခမ်းထူထူပြည့်ပြည့် ပုံမှာ ပြထားသလို သင့်နှုတ်ခမ်းက ဂျိုလီနှုတ်ခမ်းလို ထူထူပြည့်ပြည့်လေး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ … Read more
အောင်လပုံကို ပန်းချီဆွဲပီး ဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ သမီးငယ်လေး မအိမ့်ဖြူဖြူ
November 2, 2020 by Channel Lover
အောင်လပုံကို ပန်းချီဆွဲပီး ဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ သမီးငယ်လေး မအိမ့်ဖြူဖြူ ပန်းချီဆွဲတာ အရမ်းတော်လွန်းပါတယ် ထပ်တူလေးစားရပြီပေါ့ညီမလေးရေ ညီမလေးကိုလေးစားရင် hi တစ်လုံနဲ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါနော် ဒီဇင်ဘာလမှာ ပြန်ကစားချင်တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန် “လူက ဝမ်းနည်းနေလို့ မရဘူး၊အားကစားမှာ အရှုံးအနိုင်ဆိုတာာ ဖြစ်တတ်တယ်၊ဘရာဇီး ကစားသမားတွေနဲ့ ကျွန်တော်ဂျူဂျစ်ဆုကိုပဲ ၂လ၃လလောက်ပြန်လုပ်မယ်။ ကျွန်တော့်မှာလည်း အပြစ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အားနည်းချက်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့် ကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့ အောင်လအန်ဆန်က DuwunSportsနဲ့ ယနေ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမှုမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ photo credit unicode အောငျလပုံကို ပနျးခြီဆှဲပီး ဂုဏျပွုလိုကျတဲ့ သမီးငယျလေး မအိမျ့ဖွူဖွူ ပနျးခြီဆှဲတာ အရမျးတျောလှနျးပါတယျ ထပျတူလေးစားရပွီပေါ့ညီမလေးရညေီမလေးကိုလေးစားရငျ hi တဈလုံနဲ့ဂုဏျပွုခဲ့ပါနျော ဒီဇငျဘာလမှာ ပွနျကစားခငျြတဲ့အကွောငျးပွောပွလာတဲ့ အောငျလအနျဆနျ “လူက ဝမျးနညျးနလေို့ … Read more
ဒီ(၁၆)ချက်ကိုအလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါ…
ဒီ(၁၆)ချက်ကိုအလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါ… ဘ၀မှာ လေ့ လာ ပြီး မှတ်သား ထား သင့် သော စကားလုံးများ…. ၁ ။ ကိုယ့် မျက် စိ နဲ့ သေသေ ချာချာ မတွေ့ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ပါးစပ် နဲ့ အလျင်စလို သက်သေ မပြချင်ပါနဲ့ …။ ၂ ။ ကိုယ် မသိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ကို “ မသိဘူး ” လို့ တိုက်ရိုက် ဖြေဆို လိုက်တာ အပေါ့ ပါး ဆုံးပါ …။ ၃ ။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို ကျောက်ခဲ နဲ့ ပေါက်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ ပြန်မပေါက်နဲ့ … Read more